အမေကပါ ဖုန်းဖွက်ထားရတဲ့အထိ ဖြစ်နေတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ ရယ်ဖို့လည်း ကောင်း၊ သနားဖို့လည်းကောင်းတဲ့ အဖြစ်ကို ပြောပြလာတဲ့ ယုန်လေး – XB Media Myanmar
အမေကပါ ဖုန်းဖွက်ထားရတဲ့အထိ ဖြစ်နေတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ ရယ်ဖို့လည်း ကောင်း၊ သနားဖို့လည်းကောင်းတဲ့ အဖြစ်ကို ပြောပြလာတဲ့ ယုန်လေး
အမေကပါ ဖုန်းဖွက်ထားရတဲ့အထိဖြစ်နေတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ ရယ်ဖို့လည်းကောင်း၊ သနားဖို့ လည်း ကောင်းတဲ့ အဖြစ်ကို ပြောပြလာတဲ့ ယုန်လေး
အဆိုတော်၊ ဒါရိုက်တာ၊ သရုပ်ဆောင် ယုန်လေးကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးအရွယ်က တ ည်းကနေ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ အနုပညာအလုပ်တွေကို တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ စွဲလန်းစွာ လုပ်ကိုင် ခဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးက အနုပညာအလုပ်တွေကိုချစ်သလို အနုပညာရှင်တွေအ ပေါ်မှာလည်း သံယောဇဉ်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လို ချစ်သူတစ် ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ယုန်လေးက သူ့ရဲ့ ညီတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတဲ့ ခြိမ့်ကေ ကို ရဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
ယုန်လေးက “IDOL လေး နဲ့ စတွေ့တုန်းက ကိုဒိန်းဒေါင် ဖုန်းဆက်တယ်။ ဆရာချိန့် ရဲ့ အမေက ဖုန်းသိမ်းထားတယ်။ လုံးဝ ပေးမသုံးဘူးတဲ့🤣 အမေရယ် သားကို (၁၅) မိနစ်လောက်လေးပဲ ပေး သုံးပါတဲ့။ မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ 🤣. ဖုန်းဖွတ်ထားရတယ်တဲ့။ အဲ့လိုကျတော့လဲ သနားပါတယ် 🤍” ဆို ပြီး အမေကပါ ဖုန်းဖွက်ထားရတဲ့အထိဖြစ်နေတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ ရယ်ဖို့လည်းကောင်း၊ သနားဖို့လ ည်း ကောင်းတဲ့ အဖြစ်ကို ပြောပြလာပါတယ်။
ခြိမ့်ကေကိုကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ Live လွှင့်ပြီး တလွဲတွေလုပ်တတ်လွန်းလို့ သူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူ ဒိန်းဒေါင်က သူ့ရဲ့မိခင်ကို ဖုန်းသိမ်းခိုင်းထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးပြောသလိုပဲ ဒီလို ကျတော့လည်း ခြိမ့်ကေကိုရဲ့အဖြစ်က တကယ့်ကို သနားစရာပါပဲ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အေမကပါ ဖုန္းဖြက္ထားရတဲ့အထိျဖစ္ေနတဲ့ ၿခိမ့္ေကကိုရဲ႕ ရယ္ဖို႔လည္းေကာ င္း၊ သနား ဖို႔ လည္း ေကာင္းတဲ့ အျဖစ္ကို ေျပာျပလာတဲ့ ယုန္ေလး
အဆိုေတာ္၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ယုန္ေလးကေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးအ႐ြယ္က တ ည္းကေန ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို တစိုက္မတ္မတ္နဲ႔ စြဲလန္းစြာ လုပ္ကိုင္ ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုန္ေလးက အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ခ်စ္သလို အႏုပညာရွင္ေတြအ ေပၚမွာလည္း သံေယာဇဥ္ႀကီးသူတစ္ေယာက္ျ ဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္လို ခ်စ္သူတစ္ ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေ တာ့ ယုန္ေလးက သူ႔ရဲ႕ ညီတစ္ေယာက္လိုျဖစ္ေနတဲ့ ၿခိမ့္ေက ကို ရဲ႕အေၾ ကာ င္းကို အခုလိုပဲ ေျပာျပလာပါတယ္။
ယုန္ေလးက “IDOL ေလး နဲ႔ စေတြ႕တုန္းက ကိုဒိန္းေဒါင္ ဖုန္းဆက္တယ္။ ဆရာခ်ိန႔္ ရဲ႕ အေမက ဖုန္းသိမ္းထားတယ္။ လုံးဝ ေပးမသုံးဘူးတဲ့🤣 အေမရယ္ သားကို (၁၅) မိနစ္ေလာက္ေလးပဲ ေပး သုံးပါတဲ့။ မေပးႏိုင္ဘူးတဲ့ 🤣. ဖုန္းဖြတ္ထားရ ယ္တဲ့။ အဲ့လိုက်ေတာ့လဲ သနားပါတယ္ 🤍” ဆို ၿပီး အေမကပါ ဖုန္းဖြက္ထားရတဲ့အထိျဖ စ္ေနတဲ့ ၿခိမ့္ေကကိုရဲ႕ ရယ္ဖို႔လည္းေကာင္း၊ သနားဖို႔လ ည္း ေကာင္း တဲ့ အျဖစ္ကို ေျပာျပလာပါတယ္။
ၿခိမ့္ေကကိုကေတာ့ ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ Live လႊင့္ၿပီး တလြဲေတြလုပ္တတ္လြန္းလို႔ သူ႔ရဲ႕ ဆ ရာျဖစ္သူ ဒိန္းေဒါင္က သူ႔ရဲ႕မိခင္ကို ဖုန္းသိမ္းခိုင္းထားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယု န္ေလးေျပာသလိုပဲ ဒီလို က်ေတာ့လည္း ၿခိမ့္ေကကိုရဲ႕အျဖစ္က တကယ့္ကို သ နားစရာပါပဲ။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေ ပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾက ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေ ပးလို က္ပါ တယ္ေနာ္။
အိပ်ယာပေါ်တွင် နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်မော ကျနေတဲ့ချစ်ခင်ပွန်းအားပုံလေးခိုးရိုက်ထားပြီး ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ ယွန်းဝ တီ လွင်မိုး
ဖေဖေ့ရဲ့ရှုတင်ရှိရာ ပြင်ဦးလွင်မြို့ကို လိုက်သွားပြီး အနွေးထည်အမျိုး မျိုး နဲ့ စတိုင်လ်ထုတ်ပဲများနေတဲ့ မြင့်မြတ် ရဲ့သားလေး မြတ်သူ